Tontolo Iainana: Tafatafa Iray Miaraka Amin’i Isabel Hilton Mikasika Ny ChinaDialogue · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Febroary 2018 9:46 GMT
Tranonkala iray mivoaka manontolo amin'ny fiteny roa samihafa ny ChinaDialogue , izay ifanakalozana hevitra momba ireo olana amin'ny tontolo iainana ao Shina. Isabel Hilton no tonia, ary nametra-panontaniana maromaro taminy izahay mikasika ny tontolo iainana ao Shina, ireo lalao Olaimpika, ny fiovaovan'ny toetrandro ary ireo lesona azo sintonina amin'ireo fanamby sy ireo vahaolana mikasika ny tontolo iainana ao Shina. Tsara fanahy izy ka nizara ny fijeriny taminay tato anatin'ny tafatafa momba ny tontolo iainana sambany novokarinay GV.
Inona avy ireo sasantsasany tamin'ny tantara/hevitra lehibe manodidina ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fikarakarana mikasika ireo lalao Olaimpika tao Beijing araka ny fandrakovan’ ny China Dialogue?
Hitanay fa nanosika be ny fahatsiarovantena maitso tao Shina ny fikarakarana ireo lalao Olaimpika. Manandanja lehibe ho an'ny governemanta ireo lalao Olaimpika ka nahafahan'ireo olana momba ny tontolo iainana nanakona ireo olana ara-toekarena- ireo sasantsasany izay tena sarotra tontosaina ho an'ny governemanta rehetra – ary nanentana ireo karazana asa rehetra ilaina – miainga avy amin'ny orinasam-piterana ivelan'i Beijing ka hatramin'ny fanamboarana fotodrafitrasa ho an'ny fitaterana natao ho an'ny daholobe sy ireo fiara fitaterana manaja tontolo iainana.
Efa namaky mikasika ireo hetsika maitso izahay, toy ny amin'ireo ezaka fanadiovana ny rivotra amin'ny fotoanan'ireo lalao Olaimpika. Ahoana ny eritreritrareo momba ny hetsika tahàka izany? Hitanareo ho dingana fohy ezaka manokana ho an'ireo lalao Olaimpika ve ireo sa fandraisana andraikitra maharitra mba ho fanatsarana ny tontolo iainana?
Mieritreritra aho fa efa ela no niandrasana ireo fandavantena ireo ary raha ny lalao Olaimpika hampisy azy ireny, dia mety izay. Ny zava-dehibe dia tanteraka izy ireny ary ny fisarihana ny sain'izao tontolo izao ho amin'ireo olana ireo dia hahatonga ireo tomponandraikitra Shinoa mba hiezaka mafy ho amin'ny tena fanatanterarahana antsakany sy andavany azy ireny, mba tsy misy fakàn-tahaka na hosoka tamin'ireo endrika, mba tsy miatrika fahasemporana ara-tontolo iainana izy ireo. Misy lafiny manandanja ihany koa eo amin'ny fanabeazana ny vahoaka: vao avy nitsara fifaninanana adihevitra iray nahitàna ny mpianatr'ireo anjerimanontolo dimy tao Beijing aho, ary tsy mampino fa, noho ireo lalao Olaimpika, dia mahalala tsara ny vaovao avokoa ireo mpianatra ary mandray andraikitra amin'ireo olana mikasika ny tontolo iainana. Misy izany ny tombontsoa izay haharitra ao aorian'ny roa herinandro fotoanan'ny Lalao Olaimpika . Etsy ankilany kosa, misy ireo zavatra sasantsasany izay tsy haharitra – ary hamela marika tsy hay hofafàna ireo Lalao Olaimpika ireo. Faritany sasantsasany sahady no mitaraina amin'ny tsy fahazoana rano fisotro satria lasa any Beijing avokoa.
Handefa atleta ireo firenena manodidina mba handray anjara amin'ireo lalao Olaimpika, mila mitondra sarom-bava ve izy ireo hiarovana ireo mpihazakazaka amin'ny voka-dratsin'ny rivotra maloto? Eritreretinao ve fa handeha tsara ireo fepetra hanadiovana ny rivotra?
Ho hitantsika eo, saingy raha tsy tafavoaka izay, dia tsy ho hadisoana ny nanandrana. Raha ilaina, hakaton'i Shina ireo ozinina anjatony kilaometatra manodidina mandritry ny fotoanan'ny lalao Olaimpika mba hisorohana ny zava-dratsy. Miezaka mafy ny vahoaka ary hahatsiaro voadona mafy tokoa izy ireo raha toa ka misy ny olona iray hiala an-dahàrana noho ny tahotra ny haloton'ny rivotra. Noho izany dia ho maro no hizotra amin'ny fahombiazana ary ho fitiavana ny rehetra dia antenaiko fa ho vitan-dry zareo io.
Ahoana ny hevitrao mikasika ny toerana misy an'i Shina amin'ny fiovaovan'ny toetrandro; indrindra fa taorian'ny fifampiresahana tany Bali manokana?
Nandia lalana lavitra i Shina mikasika ny fiovaovan'ny toetrandro nandritra ny roa taona farany ary maro amin'ny politikam-pirenena Shinoa no mikasa hanalefaka an'io – fampiroboroboana ny fahombiazana ara-angovo, tanjona goavana azo avaozina, sns… Etsy andanin'izay, i Shina, araka ny efa fantatr'izao tontolo izao, dia mamokatra angovo amin'ny fandorana arina ary tandindonin'ny fikatonana anaty teknolojia tena mampidi-doza. Maro no miankina amin'ny toeran'i Etazonia amin'ny hoavy. Nandritra ireo fito taona farany, noho ny fanakantsakanan'ny fitantanan'i Bush momba ireo olana ireo, kely ny tsindry tamin'i Shina mba hakàny toerana miroso amin'ny fandinihana ny fiovaovan'ny toetrandro. Koa satria niova io, tokony hahita hetsika maro kokoa ao Beijing isika.
Inona no lesona azon'ireo firenena hafa tsoahina avy amin'ireo olana ara-tontolo iainana atrehin'i Shina ankehitriny ary ireo vahaolana noraisiny hatreto?